India, Pakistana: Nosokafana Mba Hanampiana Ireo Tra-boina Tamin’ny Horohorontany Ny Sisintany ao Kashmir · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2018 11:40 GMT
Hetsika iray tsy mbola fahita, neken'i India sy i Pakistana androany maraina ny hanokatra ilay sisintany tena voaarona miaramila sesehena sady ifandroritana be ao amin'ny faritr'i Kashmir mba ho an'ny fanampiana. Hosokafana any aminà fiampitàna 5 ny LOC (Line of Control na Làlana Fanarahamaso ). Niarahaba ilay fifanarahana nifanaovan'i Pakistana sy India ihany koa i Rashid Khalikov, mpandrindra ny maha-olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana tao amin'ilay faritra nisehoan'ny horohorontany, niantso izany ho toy ny ‘dingana tsara ao anatin'ity toedraharaha mampivarahontsana ity”. Hanome fahafahana hampivelatra ny fanampiana amin'ny maha-olombelona izany ho any an'ireo olona voakasika any amin'ireo tanàna lavitra manamorona akaiky ny Lalana Fanarahamaso.
Manomboka amin'ny 7 Novambra ny fanokafana ireo sisintany. Afaka mizotra amin'ny lalana roa ireo entana fanampiana ary atolotra ireo manampahefana eny an-toerana ao amin'ireo fihaonan-dalana, hoy ilay fanambarana iraisana. Hahazo alalana handingana izany an-tongotra ny olontsotra, izay ny fianakaviana voasarak'ilay sisintany no mahazo ny laharampahamehana.
Hitovy amin'ireo napetraka tany am-piandohan'ity taona ity ireo dingana mba hiampitàna ilay sisintany rehefa novelomina indray ilay tolotra fitateram-bahoaka ara-tantara izay mampifandray ireo renivohitra roa an'i Kashmir, Muzaffarabad sy Srinagar. Tsy maintsy hangataka fahazoandalana avy amin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta any amin'ny andaniny roa tonta ireo olona maniry ny hiampita mba hanamarinana ny maha-izy azy marina.
Homena alalana ao amin'ireo tanàna an-tsisintany Indo-Pakistaney, Nauseri-Teethwal, Chakothi-Uri, Hajipur-Uri, Rawalakot-Poonch, ary any Tattapani-Mendhar ireo fiampitàna dimy.
Loharano: China Post avy amin'ny Fanampiana Amin'ny Horohorontany ao Azia Atsimo